အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်နေသော ယိုးတရုပ်ကျေးရွာ မြေကိစ္စကို အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် ကျေးရွာသားမ? - Yangon Media Group
အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်နေသော ယိုးတရုပ်ကျေးရွာ မြေကိစ္စကို အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် ကျေးရွာသားမ?
ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ သြဂုတ် ၂၈
အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်နေသော ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ယိုးတရုပ်ကျေးရွာရှိ မြေကိစ္စအား အစိုးရက အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရန် ကျေးရွာသား ၅ဝဝ ခန့်က ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ သြဂုတ် ၂၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့သို့ လာရောက်ပြီး မြို့ပတ်ကာ တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အငြင်းပွားမှု ဖြစ်နေသောမြေမှာ ယိုးတရုပ်ကျေးရွာ ဈေးဟောင်း မြေ သုည ဒသမ ၃ဝ ဧကဖြစ်ပြီး ယင်းမြေသည် မြေစာရင်းပုံစံ (၁ဝ၅ /၁ဝ၆) ရရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံတစ်ဦးက ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ သူပိုင်မြေဟုဆိုကာ ခြံစည်း ရိုးခတ်ရာမှတစ်ဆင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုသည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
”အခုလို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပြဿနာ ဖြစ်နေကြတာတွေဟာ အချင်းချင်း ပြည်သူလူထုတွေဟာ ခိုက်ရန်ဒေါသ မဖြစ်အောင် တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံ တော်အတိုင်ပင်ခံ၊ တာဝန်ရှိတဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီကိုဆင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် အောင် စိစစ်ဖော်ထုတ်ပေးပါလို့ ကျွန် တော်ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ် ဖော် တောင်းဆိုသူ ဦးမိုးသီးကပြော ကြားသည်။
အဆိုပါမြေအား ဆေးရုံဝန် ထမ်းအိမ်ရာအဖြစ် တည်ဆောက် ရန် နိုင်ငံတော်က ဘတ်ဂျက်ချထား ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းရွာသားများက ပြောသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးလာအောင် မီးကုန်ယမ်းကုန် ကြိုးစားရမည့် အချိန် ဟုဆို
ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်းများရှိ ကားလမ်းကူး ရှစ်နေရာတွင် ကတ္တရာအစား ကွန်ကရစ် စလက်ပြားများ ??
စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် Myanmar Youth Micro Film Contest အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင် ဇာတ်ကားများ စတင်လက်ခံ